I-Scandinavian Retreat imizuzu eyi-5 yokuhamba kwi-Old Town La Quinta - I-Airbnb
I-Scandinavian Retreat imizuzu eyi-5 yokuhamba kwi-Old Town La Quinta
Iflethi yonke sinombuki zindwendwe onguJesse
Intliziyo yethu kunye neScandinavian Retreat kukudibanisa abantu ukuze bave inkcubeko yaseScandinavia baze benze iinkumbulo ezingenabungozi ngoxa beseSoCal. Ngaphakathi, ukuhonjiswa kwayo kubonisa iinyawo zentliziyo yakho ngendlela yokuphila yaseDinavia. Ngaphandle nje, iiNtaba zaseSanta Rosa zikunceda uzipholele ngoxa ukwi-Old Town La Quinta uhamba nje imizuzu eyi-5. Le dolophu iyakwamkela ngokwanga kwaye ikumemela kwikomityi yekofu eyosiweyo okanye isidlo esimangalisayo sokukhanyisa ikhandlela. (Kumgangatho wokuqala)
Phumla kwiintaba zaseSanta Rosa ngaphandle nje komnyango ongaphambili waseNorway. Le ndlela isetyenziswa ngayo xa ucango luvuleka ibe kukhuthaza ukuba uphume uze wonwabele ubumnandi beLa Quinta ngebhayisekile yombane eqeshwe kwiiBhayisekile Zombane ePedego. Ikhitshi lethu elikhuthazwayo laseSweden elinekofu encinci livula umoya wakho ukuze uphele kwinkcubeko yaseSweden i-Saffransbullar & Cinnamon Buns. Kodwa ungalibali ukuchitha ixesha lakho kwizifundo zikawonke-wonke ezidumileyo ze-PGA West (i-The Stadium, i-Greg Norman, okanye i-The Nicklaus) kuba uninzi lwabantu abakulindileyo kungekhona nje abakwi-chip! Kodwa linda, ukuba ufuna ukuva ukuzola okulula uze uhambe kumabala adumileyo eLa Quinta Spa and Resort, umgama nje wamatye kude neScandinavian Retreat. Ukuba uza neepali zakho zokunyuka intaba ulindele ukuva ukuba kunjani ukuba kwiZandla zabenzi kwiindlela, ngoko uza kusikelelwa. NgeB Bear Creek Oasis kunye nezinye iiTrailhead ezininzi kufutshane uza kufumana isiqwenga somusa othobekileyo ngobuhle bendalo.
- Indawo yomlilo - Indawo
yokumasajela esetyenziswa nangabanye abantu kunye nePuli
- Ikofu yasimahla kunye
neChocolates - Kulala abantu abayi-4 ngokukhululekileyo
- Uhlobo lwe-Resort Lokwenza Uzive Usetyenziswa Ngabanye Abantu kunye neNxusa
- I-Old Town La Quinta imizuzu eyi-5 xa uhamba ngeenyawo
- iLa Quinta Resort neSpa eyaziwayo yavulwa ngo-1942
- Iindlela zokunyuka intaba imizuzu eyi-5 xa uhamba ngemoto
- Iindawo ezininzi zokudlala igalufa (Ibala Lebala, iGregorman, iNicklaus, iSilverock, iNtaba kunye neDunes Course
- Iivenkile zokutyela ezininzi ezikumgama okufuphi xa uhamba ngeenyawo
Le ayiyo i-condo yakho eqhelekileyo enamagumbi okulala. Ihonjiswe kakuhle ibe yinkcubeko yaseScandinavia yaseNorway, eSweden naseDenmark efakwe ngaphakathi kumabala eEmbassy Suite aza kukwenza ufune ukuhlala ixesha elide. Ukukwazi ukuhamba imizuzu eyi-5 ukuya kwidolophu yaseLa Quinta kukwenza uzive ngathi ungumnikazi we-Ol 'Town City yakho. Yenza indawo yomlilo ikhanye kakuhle njengoko usela isiselo osithandayo ngoxa kusalungiswa ukutya ekhitshini. Into nje ekufuneka ukhathazeke ngayo kukuba uza kumema ukuba umpheke bani. Ikhitshi lineembiza neepani, izitya, amacephe, iziqholo oza kuzidinga - yiza nokutya kwakho uze upheke. Oko kukuthi, ukuba awuqeshi umpheki wakho kuba siyazi ukuba uyakufanelekela. Okanye uphumle nje ekuphekeni uze uode kwenye yeevenkile zethu zokutyela ezininzi onokuya kuzo ngeenyawo. Ungalibali ukuma umzuzu xa usiya eLa Quinta Old Town uze uphefumle umoya njengoko ubona izinto ezimangalisayo kwiiNtaba zaseSanta Rosa.
Igumbi lokuhlambela lizisa ubutofotofo ukwenzela xa ulibele isepha neshampu yakho. Sineetawuli ezinkulu zehotele ezikulindileyo. Ubumnandi baseScandinavia buvela kwiindonga zegumbi lokulala nakwigumbi elihle... ushiya ubumnandi baseSweden, eNorway naseDenmark.
Igumbi lokulala liyenza ibe yeyona nto iphambili eDenmark ngefenitshala yayo entle nenomtsalane. Yonwabela imuvi oyithandayo kwiTV ngoxa uphakamisa iinyawo zakho kwi-King Bed.
Igumbi Elihle liyakhanya ibe libangela umdla, nto leyo ekwenza uzive ngathi useNorway naseSweden ngexesha elinye. Ukususela kwi-puff ottoman yomqamelo kunye netafile yekofu eguquguqukayo, yayo yindawo yokuhlala epholileyo kunye nokulala kancinci. Isofa iba yibhedi ene-memory foam topper kwikhabhathi. Ngoko yiza nabahlobo/intsapho uze wonwabele i-Scandinavian Retreat.
Imvume # 259890
4.87 · Izimvo eziyi-78
Isembindini we-Old Town La Quinta, uhamba imizuzu eyi-5 esitratweni ukusuka kwi-condo. Oku kukunika iivenkile zokutyela, iivenkile, iibhari, iLa Quinta Brewing Co, iivenkile zekofu, nokunye okuninzi! Sikumgama wokuba ungahamba ngeenyawo ukuya kumthendeleko kunye nemizuzu eyi-5 yokukhwela imoto ukuya kwiiTennis Gardens eIndiya Wells.
Silapha ukuze senze ukuhlala kwakho kube tofotofo ngakumbi. Ngoko qhagamshelana no nanini na.
Inombolo yomthetho: 259890